သွားဆရာ ၀ န်ဆယ် ဦး အနက်ကိုး ဦး သည်ဤသွားဘက်ဆိုင်ရာသွားဆရာဝန် ၁၃ ယောက်ကိုအကြံပြုသည် - သတင်း
သွားဆရာ ၀ န်ဆယ် ဦး အနက်ကိုး ဦး သည်ဤသွားဘက်ဆိုင်ရာသွားဆရာဝန် ၁၃ ယောက်ကိုအကြံပြုသည်
အကယ်၍ သင်သည်သွားဆရာဝန် ၁၀ ခုအနက်မှ ၉ ခု (သင်ယခုဖြစ်သင့်သော်လည်း) နှင့်အကျွမ်းတဝင်မရှိလျှင်၊ ပုံမှန်အင်တာနက် - လှောင်ပြောင်ပုံ - ပုံမှန် - ဖက်ရှင်ဆန်ဆန်သွားတိုက်ဆေးတံဆိပ်များသည်သူတို့၏ထုတ်ကုန်ကိုကြော်ငြာအဖြစ်ထင်မြင်ချက်အပေါ်တွင်မူတည်သည် တစ်ဆယ်သွားကိုးယောက်ကအတည်ပြုခဲ့သည်။ သူတို့အသိအမှတ်မပြုသောအရာသည်အခြားသွားဆရာဝန်တစ် ဦး ၏ထင်မြင်ချက်ဖြစ်သည်။
ဒီ meme ဟာဟောင်းနွမ်းနေပြီ တကယ်တော့အစောဆုံးမှတ်တမ်းတင်ထားသောအသုံးပြုမှုအားဖြင့်ဖြစ်ခဲ့သည် ၁၉၉၈ တွင်ဂျေးလင်နို , ဒါပေမယ့် tbh ကံကောင်းတာကတကယ်ကတည်းကရပ်တန့်မထားပါဘူး။ ထို့ကြောင့်နှုတ် ပြန်၍ သင်၏နှုတ်ခမ်း B Pro Expert Tooth Floss ကိုဖမ်းယူပါ။
၁။ Deji memes သည်ထာဝရနေလိမ့်မည်
မိန်းကလေးတစ် ဦး ကိုလက်ချောင်းနှင့်သူမ၏အော်ဂဇင်အောင်ဘယ်လို
အဲလက်စ် (@niigott) မျှဝေသောပို့စ်တစ်ခု 1:46 pm တွင် PST မှာမတ်လ 2, 2020 ရက်တွင်
။ ။ ။ ။ ။ # သွားဆရာဝန် # သွားဆရာ ၀ န် # သွားသွားဆရာ ၀ န်
@ မျှဝေသည့်ပို့စ်တစ်ခု matrix.memechanics 3:08 pm တွင် PDT မှာဇူလိုင်လ 13, 2019 ရက်တွင်
3. ကြီးမားသော crossover
•• [@ to.not.blow.up.a.groupchat မှခိုးယူခြင်း] • #memes #cats # သွားဆရာ ၀ န် #toothpaste #laughs #kitty # 9outof10dentists #catmemes #dentistmemes #funnymemes
မျှဝေသည် ဒါကကြက်သားလား ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၁၀ ရက်၊ ညနေ ၄:၂၆ နာရီ၊
ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်သည် WTF သည်အခြားသွားဆရာဝန်နှင့်တက်မည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ၊ သို့သော်သူ့ကိုစောင့်ရှောက်ရန်အကောင်းဆုံးမှာဖြစ်နိုင်ပါသည်။ #9သွားဆရာဝန်များ #colgate #vampire #shaq #evil #dentist #psyne #jesussaves
မျှဝေသည် မင်္ဂလာပါ (@psyneways) ၂၀၁၃ 3ပြီ ၃ ရက်ညနေ ၃း၃၀ နာရီ PDT တွင်
သူအကြံမပေးပါဘူး ။ ။ စပျစ်သီးဂိုဏ်း @ big.cheese.boii @blue_meme_dump @ rusty.spoons69 @ Kingdom_of_hungaryball1941 @ mrchallenge687 @ iou.mp4 ။ #grapegang # #memes #meme #rarememes #memeaccount #memesdaily #spicymemes #unusualmemes #shitposts #weirdmemes # 9/10 #9of1010dentists
မျှဝေသည် HIATUS တွင်လက်ရှိ (@arturoalanzo) ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ သြဂုတ် ၁၀ ရက်၊ ည ၇း၃၀ တွင် PDT တွင်
လိုက်နာပါ။ သွားဆရာဝန် # 9outof10 # ၉ သွားဆရာဝန်များ # နံပါတ် ၁၀ - သွားဆရာဝန်များ # မွန်ဆိတ်သိုင်း #monstersincmemes # မွန်ပညာရပ်နယ်ပယ်အမျိုးမျိုး # ၉ ။
မျှဝေသည် အတူ 4:50 pm တွင် PST မှာနိုဝင်ဘာ 13, 2019 ရက်တွင် (@ cooch.exe)
yeet: level ကို 100 ။ ။ ။ ။ ။ # area51 # area51memes # area51raid # toothpaste #9ofof10dentists # crestwhite3d
မျှဝေသည် ကျွနုပ် 5:45 pm တွင် PDT မှာ 2019, စက်တင်ဘာလ 3, 2019 ရက်နေ့တွင် (@phokingmeme)
#meme #funny # 9gaghumor # 9gag #toothpaste # 9outof10dentists
မျှဝေသည် 9GaGhumor 3:17 pm တွင် PDT မှာသြဂုတ် 24, 2019 ရက်တွင် (9.gaghumor @)
9. Un အရသာရှိတဲ့ရေစာ
@ မျှဝေသည့်ပို့စ်တစ်ခု .ရာဝတီ 7:55 pm တွင် PDT မှာသြဂုတ်လ 15, 2019 ရက်တွင်
၁၀။ Billy Ray Cyrus meme ပြန်လာရန်လိုအပ်သည်
သွား ၁၀ ခုအနက် ၉ ခုမှ ၉ ခုသည်သွားများကိုပျက်စီးစေပြီးသွားဆရာဝန်များကိုငွေပိုမိုပေးရလိမ့်မည်ဆိုပါက Colgate ကိုသာအကြံပြုလိုလျှင်။ သွား ၁၀ ခုအနက် ၁ ခုသာကျင့်ဝတ်နှင့်ညီညွတ်သည်ဆိုလျှင်ကော။ pic.twitter.com/osdBev2Hci
- Sean (@HileeIronicAcid) ဇန်နဝါရီလ 10, 2020
11. သူ Tho တစ်အချက်တယ်လုပ်ပါ
သွားဆရာဝန် ၁၀ ဦး တွင် ၉ ဦး သည်သွားတိုက်ဆေးတံဆိပ်တပ်ရန်အကြံပြုပါကလူများသည်အဘယ်ကြောင့်ဂရုစိုက်ရသနည်း။ သွားမကောင်းရင်သွားဆရာဝန်ကပိုငွေရှာတယ်။
ကျန်းမာရေးအာမခံကုမ္ပဏီ ၁၀ ခုအနက် ၉ ခုကသွားတိုက်ဆေးကိုကျွန်ုပ်ချင်တယ်။
Nick Nick Pappas (@Pappiness) ဖေဖော်ဝါရီလ 28, 2020
၁၂။ Colgate ဒါမှမဟုတ် 1/10 ဆိုတာမကောင်းဘူးလား။
13. ညံ့ဖျင်းသောစာလုံးပေါင်းပေမယ့်အထက်တန်းလွှာ meme အသုံးပြုမှု
•ဤမှတ်စု ၃၉ ခုသည် Love Is Blind ၏ဇာတ်လမ်းကိုအပြည့်အဝဖော်ပြသည်